स्वास्नी कि साथी ?
आजकल ‘स्वास्नी’ र ‘साथी’ भन्ने शब्द निकै विचित्रका लाग्न थालेको छ । यो दुबै शब्दले बोकेको आयतन र भाव समेत कता फरक हो कि जस्तो पनि लाग्ने गर्छ ।
पहिला ‘स्वास्नी’बारे चर्चा गरौं । सामान्यतः नेपाली प्रचलनअनुसार अरुले नै दु:ख गरेर हुर्काएकी छोरीलाई सामाजिक, धार्मिक परम्पराअनुसार घरमा ल्याउने स्त्री नै ‘स्वास्नी’ हुन् । अरुको घरमा गएर मोलमोलाई गर्ने, तौलने र सम्झौता गरी किनेको मालजस्तो, एउटा निर्जीव प्राणीजस्तो । ‘ल्याउने’ र ‘बनाउने’ भन्ने शब्दभित्र अपमानको गन्ध लुकेको हुन्छ ।
यता सानैदेखि स्त्री जातिलाई ‘स्वास्नी बनाउनुपर्छ’ भनेर हामीलाई सिकाइने गरिन्छ । यस्तो चिन्तन कलिलो मस्तिष्कमा हाल्नमा पुराना वाद, शास्त्र र ग्रन्थको ठूलो हात छ । यस्ता शास्त्र र ग्रन्थलाई शिक्षाको मानक बनाउने हो भने स्त्री दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न पुग्छन् । नबनून् पनि किन ?
मानिसको प्रवृत्ति कमजोरी यस्तै छ । कसैलाई कमजोर भनेर परिभाषित गर्ने र सोहीअनुसार दमन गर्ने मानवजातिको परम्परा नै बन्दै आएको छ । नेपाली समाजमा हुर्कने कोही पनि यसको अपवाद बन्न कठिन हुन्छ । पुराना वाद, शास्त्र र ग्रन्थमा स्त्री जातिलाई दोस्रो दर्जाको प्राणी भनेर व्याख्या गरेको सुन्दा मज्जा नमान्ने पुरुष कमै देखेको छु ।
म पनि यसबाट अछुतो छैन । साँच्चै, यिनको प्रभावले स्त्री जातिलाई दोस्रो दर्जाको प्राणीको रुपममा हेर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन मभित्रै अझै पनि नमज्जाले गडेर बसेको छ । आधा धर्ती ढाकेका स्त्री जातिलाई यसरी मूल्यहीन, मानहीन र शानहीन बनाउँदा आउने अमानवीय आनन्दको मज्जा मेरा बाउ, हजुरबाउ र जिजुबाउले लिएकै हुन् । अनि मभित्र पनि त्यस्तो रहर नपलाउने कुरै भएन ।
अब लागौं ‘स्त्री जातिलाई साथी बनाउनुपर्छ’ भन्ने शब्दतिर ।
‘साथी’ शब्द अत्यधिक बहुआयामिक शब्द हो । यसबारे वर्णन नगरिको वाद, ग्रन्थ र शास्त्र कमै होलान् । विशेषगरी ‘स्त्री जाति पनि साथी हुन्’ भन्ने कुरा आधुनिक ग्रन्थ र वादमा बढी पाइन्छ । आधुनिकतासँगै ‘स्त्री साथी’ शब्दले ‘समान हैसियतका मानव’ भन्ने अर्थ ग्रहण गरेको छ । ‘स्त्रीलाई स्वास्नी बनाउनुपर्छ’ भन्ने चिन्तनभन्दा यो चिन्तन निकै लोभलाग्दो पनि छ ।
यो चिन्तनभित्र समेत तीन खाले प्रवृत्ति अझै पनि देख्न सकिन्छ ।
पहिरो प्रवृत्ति भनेको ‘स्त्री र पुरुष बराबर हुन्’ भन्ने वैज्ञानिक सोंच हो । यान्त्रिक भएपनि यो सोंचबाट मेरा धेरै साथीहरु लठ्ठै परेका छन् । महिला र पुरुष दुवैलाई समान देख्ने यो सोंच आधुनिक जमातमा लोकप्रिय नबन्ने कुरै भएन ।
दोस्रो प्रकारको प्रवृत्तिले महिला र पुरुष भनेका आवश्यकताका उपज हुन् भन्ने सोच राख्छ । यो सोचले स्त्री भनेको पुरुष सरह समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्राणी हो भन्छ ।
तेस्रो प्रवृत्तिमा महिलाले पुरुषलाई पछि पार्न सक्छन् भन्ने सोच व्याप्त छ ।
‘स्वास्नी’ र ‘साथी’ शब्दबारे कुरा गर्दा ‘प्रेमिका’ भन्ने शब्द छुटाउनु अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ । ‘प्रेमिका’ शब्द समेत बहुआयामिक शब्द हो । यो शब्दभित्र भौतिक, अध्यात्मिक र जैविक भाव लुकेको छ ।
त्यसो भने, स्त्रीलाई साथी भन्ने कि ? स्वास्नी भन्ने ? वा प्रेमिका ? ब्रम्हाण्डका हरेक चीजलाई उपभोग्य वस्तु मान्ने प्रवृत्ति विश्वभर नै व्याप्त भएका बेला यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन । । यद्यपि, फरक शान, मान र मूल्य भएको एउटा पृथक तर पुरुषको परिपूरक पाटोको रुपमा स्त्रीलाई हेर्ने हो भने उत्तर खोज्न सहज होला ।
प्रधानमन्त्री ज्यू, भिटेनलाई थुनेर गल्ती गर्नु भो !
दशैंको टीकामा पनि विभेद ! को ‘भिआइपी’, को ‘सर्वसाधारण’ ?
‘महरा पतनको कारण रोशनी मात्र होइन’
महरा यौनकाण्डः कस्तो पर्ला नेकपालाई असर ?
‘नेकपाले नेपाललाई बनाउन चाहेको कम्बोडिया जस्तो हो’
देश, ब्लग, वागमती प्रदेश
पशुपतिनाथले रूपलालको आत्मालाई शान्ति दिऊन् !